कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो तस्बिर राखेर अर्थपूर्ण स्टटास आरजुले सार्वजनिक गर्नुको अर्थ के होला ? – Kavrepati
Home / समाचार / कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो तस्बिर राखेर अर्थपूर्ण स्टटास आरजुले सार्वजनिक गर्नुको अर्थ के होला ?
admin June 23, 2021	समाचार Leaveacomment 118 Views
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाले बुधवार अनौठो तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । जसमा प्राय सामाजिक सञ्जालमा नदेखिने उनका छोरा पनि छन् । देउवा महाधिवेशनमा फेरी अध्यक्ष बन्ने योजनामा छन् । रु ष्ट रहेका नेताहरुलाई फकाउँदै छन् ।
Previous आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक सहित तीन जनालाई १ अर्ब ३३ लाख बढीको मुद्दा दायर
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार १० गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल